DAAWO: Gabadhii ugu horreeysey ee Soomaali ah ee u safata xulka Sweden kana dheesha Horyaalka K/Kolayga Maraykanka | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha DAAWO: Gabadhii ugu horreeysey ee Soomaali ah ee u safata xulka Sweden...
DAAWO: Gabadhii ugu horreeysey ee Soomaali ah ee u safata xulka Sweden kana dheesha Horyaalka K/Kolayga Maraykanka
(Stockholm) 23 Juun 2019 – Farxiya Cabdi waa gabar Soomaaliyeed oo ay waalidkeed kala soo qexeen dalka Somalia, iyadoo noqotay ciyaaryahanad dheesha kubadda kolayga, haatanna u safata xulka Sweden.
Waxay sheegtay inay kusoo bilowday koox ka jirtey Fryshuset si wanaagsanna loosoo dhoweeyay. ”Waxaan ka koobnayn Swedish iyo dad yimid halkan sida aniga. Khasab maaha inaad madax caddaato si aad Sweden uga dheesho.” ayay tiri Farxiya Cabdi.
Farxiya Cabdi ayaa 2012 rikoodh dhigtay kaddib markii ay ku biirtay kooxda Los Angeles Sparks oo ka dheesha horyaalka WNBA (Horyaalka Kubadda Kolayga Hablaha Maraykanka).
Waxay noqotay qofkii 4-aad oo Swedish ah oo halkaa ka dheesha iyo gabar Soomaaliyeed tii ugu horreeysey, iyadoo awalna rikoodhkaas ka haysatey dhanka Sweden. Haatan se waxay u safataa kooxda gabdhaha ee Galatasaray oo ka dhisan Turkiga.
Farxiya Cabdi ayaa timaada Sweden iyadoo tagta garoonka Solnahallen halkaasoo ay tusaale ay ku daydaan u tahay koox hablo ah oo ay Soomaali iyo ajnabi ku jiraan oo la yiraahdo Vårby Gäris.
”Waxaan doonayaa inaan tusaale u noqdo hablaha doonaya inay dheelaan kubadda kolayga.” ayay tiri Farxiya oo dareensan in si wanaagsan loosoo dhoweeyay.
Previous articleTOOS u daawo: Algeria vs Kenya – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleXAAF oo ka baxay heshiiskii Ahlu Sunna (War Saxaafadeed xilli dambe soo baxay)